सन्तान अमेरिकामा, हजुरआमा पशुपतिको वृद्धाश्रममा ! | BeniOnline.com.np जिल्लाका ताजा अनलाइन समाचार
घर समाचार राष्ट्रिय समाचार सन्तान अमेरिकामा, हजुरआमा पशुपतिको वृद्धाश्रममा !
२२ कार्तिक २०७६, शुक्रबार १५:५०
ठिक छ वर्षअगाडि इन्द्रकुमारी रिजालले आफ्ना ‘मालिक’ गुमाइन् । त्यसपछि उनको जीवनबाट हाँसो गुम्यो । जीवन उजाड भयो । त्यसपछि उनी पशुपतिनाथको शरणमा आइन् । अब बल्ल उनको ओठमा कहिलेकांही हाँसो देखिन थालेको छ । केही समयअघि पशुपतिनाथ मन्दिरको छेवैमा रहेको वृद्धाश्रम पुग्दा इन्द्र कुमारी विगतमा फर्केर टोलाइरहेकी थिइन् । उनको ब्लडप्रेसर जाँच गर्न आएका केही स्टाफ नर्स नजिकै थिए । तीनैमध्ये एकलाई इन्द्रकुमारीले सोधिन्, ‘नानी तिम्रो बिहे भयो ?’ कोठाभर हाँसो गुन्जियो ।
इन्द्रकुमारीले जवाफ पाइन्, ‘यति छिटो ?’ यो उत्तर इन्द्रकुमारीका लागि अर्को आश्चर्य थियो । उनको त ११ वर्षको उमेरमा विहे भएको थियो । त्यही विवाहले उनको जीवनमा अनेक मोड ल्याएको थियो । चितवनी इन्द्रकुमारीको चितवनमै विवाह भयो । ११ वर्षमा नै उनले घर सम्हाल्न थालिन् । अहिले ९५ वर्ष पुगेकी इन्द्रकुमारीले ती बेलाका कति कुरा त बिर्सिसकिन् । सम्झना छ त उनलाई, त्यो विगतले दिएको दुःखको छ । ‘जीवनमा सुरु देखि नै दुःख पाएँ,’ उनले भनिन् । त्यसपछि विगतमा फर्किइन् इन्द्रकुमारी ।
इन्द्रकुमारीकी पहिलो सन्तानका रुपमा जन्मिएकी थिइन्, छोरी । तर, चार वर्ष पुग्दानपुग्दै उनको निधन भयो । पहिलो सन्तानको बिछोडलाई भुल्न त के सक्थिन्, इन्द्रकुमारीले दोस्रो सन्तान जन्माइन् । उनकी दोस्रो सन्तानका रुपमा पनि छोरी नै जन्मिएकी थिइन् । अफसोस ! उनी पनि लामो समय बाँच्न सकिनन् । त्यति बेला इन्द्रकुमारी १९ वर्षकी मात्र थिइन् । ‘लगातार दुई सन्तान गुमाएकी थिएँ बाबु, पीडा खप्नै सकिनँ,’ त्यो समय सम्झँदा अहिले पनि इन्द्रकुमारीको आँखा रसाउँछ, ‘म त बौलाही भएकी थिएँ ।’ दुई छोरी गुमाएपछि इन्द्रकुमारी पहिलो पटक काठमाडौं आइन्, पशुपतिमा लाख बत्ती बाल्न।